ကမြ ဒီတဈခါ Single Mom တှအေတှကျ သတိထားစရာလေး ပွောပွခငျြလို့ပါ - Tameelay
ကမြ ဒီတဈခါ Single Mom တှအေတှကျ သတိထားစရာလေး ပွောပွခငျြလို့ပါ
May 10, 2020 by Tameelay
မိနျးမသားတို့ ရငျဖှငျ့ရာ Group မှာ လာရောကျရငျဖှငျ့ထားတဲ့ သမီးလေးတဈယောကျရဲ့ ရငျဖှငျ့စာလေးတှေ မြှဝခေဲ့တာဆိုရငျ အမှတျစဉျလေးတှနေဲ့ (၁၀) ထိပွီးခဲ့ပါပွီ . . .
အခု အမှတျစဉျ (၁၁) အနနေဲ့ သမီးလေးတဈယောကျ ရငျဖှငျ့ထားတာကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော . . .
ညီအမတှေ အားလုံး မင်ျဂလာပါရှငျ့
ဒီအကွောငျးက ကမြကိုယျတိုငျ ကွုံဖူးတာ မဟုတျတော့
အကွံဉာဏျတော့ ပေးနိုငျမှာ မဟုတျလို့ တောငျးပနျပါတယျ
Single Mom တှေ တှကွေုံ့ရမယျ့ အခကျအခဲတှနေဲ့ တကယျကွုံလာရငျ ရှေးခယျြတဲ့နညျးလမျး မှနျကနျစခေငျြတဲ့ စတေနာနဲ့မို့ အမှားပါရငျ ခှငျ့လှတျပေးကွပါနျော
ဒါ ကမြ အမကေိုယျတိုငျ ကွုံခဲ့တာနဲ့ အမေ့ ရှေးခယျြမှု့ မှနျလားမမှနျလားတော့ ကမြ မဆုံးဖွတျရကျပါဘူး
အမဟော ကလေး 3ယောကျနဲ့ အသကျ29နှဈမှာ ကမြတို့ရဲ့ အဖေ ဆုံးသှားခဲ့တော့ မုဆိုးမဘဝရောကျခဲ့ရတယျ
အဖေ ဆုံးတော့ ကမြက 3လ သမီးဘဲရှိသေးတော့ အဖလေဲမမွငျဖူး အဖလေို့လဲ မချေါခဲ့ရဖူးပါဘူး
အမလေေ ငယျငယျရှယျရှယျ မုဆိုးမ ဘဝနဲ့ စီးပှားရေးလဲ မလုပျတတျ မကိုငျတတျ ပငျပငျပမျးပမျးဆငျးဆငျးရဲရဲနဲ့ ကမြတို့ မောငျနှမ 3ယောကျကို ရှာကြှေးရတာ
ကမြကလညျး အရမျးခြူခွာလို့ တညလုံး ငုတျတုတျထိုငျပွီး ထိနျးခဲ့ရတဲ့နတှေ့ေ အမြားကွီး ရှိခဲ့တယျလို့ ပွောတယျ
ဆငျးရဲတဲ့ မိသားစုမို့ အမမှေ့ာ အားကိုးစရာလဲ မရှိ မလုပျတတျပမေယျ့ ကမြတို့ကို အမြိုးစုံ ဈေးရောငျးပွီး ကြှေးရရှာတယျ အမေ့ ပုခုံးပျေါမှာ ဈေးထမျး ထမျးရလှနျးလို့ ဘုကွီးတောငျ ထှကျနရှောတယျ 😭
ရကျကှကျထဲက ယောကျြား တနှာရူးတှဆေိုတာလေ သူတို့မှာ မိနျးမတှေ ရှိရကျနဲ့ မုဆိုးမ လငျဆာနမှောဘဲဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ အမကေို့ နှောကျယှကျကွတယျ
ဈေးရောငျးပွနျခြိနျဆို အတငျးလိုကျကပျ အတငျးဆှဲနဲ့ အမေ ရှကျလဲ ရှကျခဲ့ရသလို အရမျးလဲကွောကျခဲ့ရတယျတဲ့
အဲ့ဒီတော့ အမေ အားကိုးရှာရတာနမှောပေါ့နျော
အမေ နောကျအိမျထောငျ ပွုရတယျ (အဖဆေုံးပွီး တဈနှဈ မကွာဘူးနဲ့တူပါတယျ)
ကမြ အကိုကွီးက 7နှဈ8နှဈအရှယျကို အဖအေ့မြိုးတှကေ သငျပေးတယျ နငျ့အမယေောကျြားယူရငျ အဲ့ဒီလူက နငျတို့ကို အရကျဝယျခိုငျးမှာ နငျတို့ကို နှိပျစကျမှာလို့ နားထဲကို ရိုကျသှငျးတယျ
အဲ့ဒီတော့ ဒီကောငျလေးက အမကေို့ မပွောပမေယျ့ ကမြတို့ ပထှေးကို အရမျးမုနျးတယျ အမတေို့ ယူကတညျးက အမေ ကနြော့ကို အရညျဆို ဘာအရညျမှ မဝယျခိုငျးနဲ့လို့ ပွောတယျတဲ့ သူ အရကျဝယျခိုငျးမှာ ကွောကျတာနမှော 😓( ဆီတောငျ ဝယျခိုငျးလို့ မရခဲ့ဘူး )
အမယေူတဲ့ယောကျြားက အမကေို့ ခဈြသလို ကမြတို့အပျေါလဲ ကောငျးပါတယျ အဖတေဈယောကျလိုဘဲ
ကမြအကိုတှကေတော့ ကွီးလာလေ သူ့ကို မုနျးလဘေဲထငျတယျ တဈခြိနျလုံး ရနျလို ရနျသတျ ပွသနာရှာနတေော့ အမမှေ့ာ မအေးခမျြးရပွနျဘူး
အမကေ နောကျအိမျထောငျနဲ့ ညီမလေး 2ယောကျထပျမှေးတော့ ကမြ ညီမအကွီးလေးက အရမျးသနားစရာကောငျးတယျ အကိုက သူ့အဖကေို မကနြေပျတိုငျး သူ့အပျေါ ပုံခြ နိုငျစားတာကို ခံခဲ့ရရှာတာ😑
ကမြ အကိုတှလေဲ ပထှေးကိုမုနျးတဲ့စိတျက ရငျထဲမှာ အစိုငျအခဲလိုဖွဈနပွေီး အရကျသောကျတတျလာတယျ အရမျးလဲဆိုးတယျ ရနျပှဲတိုငျးမှာ တဈဘကျဘဲမေး ကနျြတဲ့တဈဘကျက ကမြ အကို 2ယောကျပါတယျ🤨
ကမြကတော့ သမီးဆိုတော့ အမရေဲ့ ရငျဖှငျ့စရာပေါ့
အမကေ သူ ခံစားရတာတှေ သူ ဘာကွောငျ့ ယောကျြားယူရတာတှကေို ကမြကို ပွောပွတယျ အမကေို့ အရမျးသနားတာဘဲ အမကေို့ အပွဈလဲမမွငျပါဘူး
သူ့ဘဝ ကွမျးတမျးခဲ့ရတာကို လူတိုငျး ဒီလို ဆုံးဖွတျမိမှာဘဲထငျတယျ
အမေ အခြိနျတျောတျောကွာ သူ့သားတှေ ဆိုးတဲ့ ဒါဏျ ရဲစခနျး တှရေောကျ သူမြားကို လြျောကွေးပေးရတဲ့ အကွိမျပေါငျးမြားစှာ ကွုံခဲ့ရတာတောငျ သူ့သားတှဆေိုးတာက သူ နောကျအိမျထောငျပွုလို့ဆိုပွီး အမွဲတမျး စိတျမကောငျးဖွဈခဲ့ရတယျ😪
အခုတော့ အကိုတှလေဲ လိမ်မာသှားပွီ ကမြတို့လဲ ကွီးလာတော့ အမကေို့ ခမျြးသာတဲ့ဘဝ မဟုတျပမေယျ့ လိုလသေေးမရှိထားနိုငျလို့ အမေ စိတျခမျြးသာနရေပါပွီ
အမပေငျပမျးခဲ့ရတာတှကေို တှေးမိတိုငျး သနားလှနျးလို့ အခုခြိနျမှာ ဘာကွောငျ့မှ စိတျမဆငျးရဲစခေငျြသလို အမအေ့တှကျဆို ဘာဘဲ ပေးဆပျရပါစေ ကမြကတော့ ပေးဆပျမှာဘဲ
ညီအမတှကေို ပွောခငျြတာက ကွုံလာတဲ့ လောကဓံကို ဖွရှေငျးတဲ့အခါ မှနျကနျစှာ ရှေးခယျြတတျဘို့နဲ့
ရှေးခယျြတဲ့အခါ သားသား မီးမီးလေးတှေ နရောကပါ စဉျးစားပေးကွပါလို့
သတ်တိရှိရှိ ရဲရဲဝံ့ဝံ နဲ့ သားသမီးတှေ အတှကျ လောကဓံကို ရငျဆိုငျ ကြျောဖွတျနကွေတဲ့ Single Momတိုငျးကို လေးစားပါတယျ
အားမငယျ စိတျဓာတျ မကဘြဲ အရာရာကို ရငျဆိုငျ ကြျောဖွတျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးရငျး ယနကေ့ရြောကျသော အမမြေားနကေို့ ဂုဏျပွုပါတယျ
မိနျးမသားတို့၏ Comment မြား
A : မုဆိုးမ တခုလပျဆိုပီးယောကျကြားတှကေအကဲစမျးခငျြတာကိုမိနျးမတှကေလဲ မိနျးမခငျြးစာနာစိတျမရှိပဲ သူတို့ယောကျကြားကိုမွူဆှယျတယျဆိုပီး အျောဟဈဆဲဆို အမကေိုဆဲဆိုရုံတငျမကဘူး အရှယျမရောကျသေးတဲ့သားသမီးကိုပါပုတျခတျစျောကားသေးတယျ တခါတလေ ဘဝကိုစိတျဓာတျကမြိတယျ
B : အမကေိုနားလညျမှု့ပေးတတျတဲ့စိတျလေးကိုခဈြတယျ ဒီလိုဘဝဆိုတာကိုယျတိုငျကြျောဖွတျဖူးတဲ့မိနျးမတိုငျးနားလညျစာနာတတျကွတယျမိနျးမခငျြးမစာနာတတျကွတာလဲဒို့မိနျးမခငျြဘဲအိမျထောငျဖကျမရှိတာနဲ့သူ့လငျခိုးနိုးနိုးအထငျသေးကွတာလဲဒို့မိနျးမတှဘေဲ ဒါမို့တဈခြို့မိခငျတှကေဒီလိုအခကျခဲတှကွေောငျ့နောကျအိမျထောငျကိုပွုဖွဈကွတာ မမ လဲ(29)နှဈမှာသားငယျလေးမီးတှငျးသုံးရကျသားထဲကသူ့အဖကေအကွှေးတှနေဲ့ပွဈထားခဲ့တာခုဆိုသားငယျလစေ(9)နှဈထဲရောကျနပေီငယျရှယျခြိနျကလေးသုံးယောကျအမမေို့ ရမလားလို့သှေးတိုးစမျးတဲ့အောကျတနျးစားယောကျြားတှနေဲ့ကွုံတှရေ့သလို ဒီမိနျးမ ကလေးတှနေဲ့ကွာရှညျမရပျတညျနိုငျပါဘူးငါ့ယောကျြားမြားခိုးမလးလို့မိနျးမခငျြးအထငျသေးတာလဲကွုံဖူးတယျ ဒါတှကေိုအံခဲဖွတျကြျောရတာခကျခဲပငျပနျးပါတယျဘာဘဲဖွဈဖွဈခုနောကျပိုငျးကိုယျအနမှေနျတော့ဘယျသူမှမစရဲမပွောရဲပါဘူးအိမျထောငျဖကျမရှိလို့ကလေးတဈဖကျနဲ့ရပျတညျနတေဲ့မိခငျတိုငျးကအရာရာသူ့သာသမီးကသူ့အတှကျနံပါတျတဈပါဘဲ သားသမီးဆိုတဲ့သံယောဇဉျလေးကွောငျ့ခကျခဲတဲ့ကွားကသူတို့ဘဝကိုကြားကနျပွီးရပျတညျနကွေတာမို့ အထငျမကွီးရငျနပေါစအေထငျသေးမစျောကားကွရငျကိုကူညီရာရောကျပါတယျ
C : သမီးမတှကျအမွဲဦးစာပေးတယျ စိတျဒဏျရာရမှာအကွောကျဆုံးပဲ
D : လိမျမာလိုကျတဲ့သမီးလေး
ဒီ Post လေးကတော့ တငျတငျခငျြးမှာပဲ မှတျခကျြ ၁၁ ခုရှိပွီး အဲ့ထဲကမှ အနညျးစုကို ပွနျလညျမြှဝလေိုကျခွငျးဖွဈပါတယျ . . .
မိနျးမသားတို့ရငျဖှငျ့ရာ Group ကို အဖှဲ့ဝငျလိုပါက Comment မှာ Group လို့ရေးခဲ့ပေးပါ
မိန်းမသားတို့ ရင်ဖွင့်ရာ Group မှာ လာရောက်ရင်ဖွင့်ထားတဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ဖွင့်စာလေးတွေ မျှဝေခဲ့တာဆိုရင် အမှတ်စဉ်လေးတွေနဲ့ (၁၀) ထိပြီးခဲ့ပါပြီ . . .
အခု အမှတ်စဉ် (၁၁) အနေနဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက် ရင်ဖွင့်ထားတာကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် . . .
ညီအမတွေ အားလုံး မင်္ဂလာပါရှင့်
ကျမ ဒီတစ်ခါ Single Mom တွေအတွက် သတိထားစရာလေး ပြောပြချင်လို့ပါ
ဒီအကြောင်းက ကျမကိုယ်တိုင် ကြုံဖူးတာ မဟုတ်တော့
အကြံဥာဏ်တော့ ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်လို့ တောင်းပန်ပါတယ်
Single Mom တွေ တွေ့ကြုံရမယ့် အခက်အခဲတွေနဲ့ တကယ်ကြုံလာရင် ရွေးချယ်တဲ့နည်းလမ်း မှန်ကန်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့မို့ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါနော်
ဒါ ကျမ အမေကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့တာနဲ့ အမေ့ ရွေးချယ်မှု့ မှန်လားမမှန်လားတော့ ကျမ မဆုံးဖြတ်ရက်ပါဘူး
အမေဟာ ကလေး 3ယောက်နဲ့ အသက်29နှစ်မှာ ကျမတို့ရဲ့ အဖေ ဆုံးသွားခဲ့တော့ မုဆိုးမဘဝရောက်ခဲ့ရတယ်
အဖေ ဆုံးတော့ ကျမက 3လ သမီးဘဲရှိသေးတော့ အဖေလဲမမြင်ဖူး အဖေလို့လဲ မခေါ်ခဲ့ရဖူးပါဘူး
အမေလေ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် မုဆိုးမ ဘဝနဲ့ စီးပွားရေးလဲ မလုပ်တတ် မကိုင်တတ် ပင်ပင်ပမ်းပမ်းဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ ကျမတို့ မောင်နှမ 3ယောက်ကို ရှာကျွေးရတာ
ကျမကလည်း အရမ်းချူခြာလို့ တညလုံး ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီး ထိန်းခဲ့ရတဲ့နေ့တွေ အများကြီး ရှိခဲ့တယ်လို့ ပြောတယ်
ဆင်းရဲတဲ့ မိသားစုမို့ အမေ့မှာ အားကိုးစရာလဲ မရှိ မလုပ်တတ်ပေမယ့် ကျမတို့ကို အမျိုးစုံ ဈေးရောင်းပြီး ကျွေးရရှာတယ် အမေ့ ပုခုံးပေါ်မှာ ဈေးထမ်း ထမ်းရလွန်းလို့ ဘုကြီးတောင် ထွက်နေရှာတယ် 😭
ရက်ကွက်ထဲက ယောက်ျား တနှာရူးတွေဆိုတာလေ သူတို့မှာ မိန်းမတွေ ရှိရက်နဲ့ မုဆိုးမ လင်ဆာနေမှာဘဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ အမေ့ကို နှောက်ယှက်ကြတယ်
ဈေးရောင်းပြန်ချိန်ဆို အတင်းလိုက်ကပ် အတင်းဆွဲနဲ့ အမေ ရှက်လဲ ရှက်ခဲ့ရသလို အရမ်းလဲကြောက်ခဲ့ရတယ်တဲ့
အဲ့ဒီိတော့ အမေ အားကိုးရှာရတာနေမှာပေါ့နော်
အမေ နောက်အိမ်ထောင် ပြုရတယ် (အဖေဆုံးပြီး တစ်နှစ် မကြာဘူးနဲ့တူပါတယ်)
ကျမ အကိုကြီးက 7နှစ်8နှစ်အရွယ်ကို အဖေ့အမျိုးတွေက သင်ပေးတယ် နင့်အမေယောက်ျားယူရင် အဲ့ဒီလူက နင်တို့ကို အရက်ဝယ်ခိုင်းမှာ နင်တို့ကို နှိပ်စက်မှာလို့ နားထဲကို ရိုက်သွင်းတယ်
အဲ့ဒီိတော့ ဒီကောင်လေးက အမေ့ကို မပြောပေမယ့် ကျမတို့ ပထွေးကို အရမ်းမုန်းတယ် အမေတို့ ယူကတည်းက အမေ ကျနော့ကို အရည်ဆို ဘာအရည်မှ မဝယ်ခိုင်းနဲ့လို့ ပြောတယ်တဲ့ သူ အရက်ဝယ်ခိုင်းမှာ ကြောက်တာနေမှာ 😓( ဆီတောင် ဝယ်ခိုင်းလို့ မရခဲ့ဘူး )
အမေယူတဲ့ယောက်ျားက အမေ့ကို ချစ်သလို ကျမတို့အပေါ်လဲ ကောင်းပါတယ် အဖေတစ်ယောက်လိုဘဲ
ကျမအကိုတွေကတော့ ကြီးလာလေ သူ့ကို မုန်းလေဘဲထင်တယ် တစ်ချိန်လုံး ရန်လို ရန်သတ် ပြသနာရှာနေတော့ အမေ့မှာ မအေးချမ်းရပြန်ဘူး
အမေက နောက်အိမ်ထောင်နဲ့ ညီမလေး 2ယောက်ထပ်မွေးတော့ ကျမ ညီမအကြီးလေးက အရမ်းသနားစရာကောင်းတယ် အကိုက သူ့အဖေကို မကျေနပ်တိုင်း သူ့အပေါ် ပုံချ နိုင်စားတာကို ခံခဲ့ရရှာတာ😑
ကျမ အကိုတွေလဲ ပထွေးကိုမုန်းတဲ့စိတ်က ရင်ထဲမှာ အစိုင်အခဲလိုဖြစ်နေပြီး အရက်သောက်တတ်လာတယ် အရမ်းလဲဆိုးတယ် ရန်ပွဲတိုင်းမှာ တစ်ဘက်ဘဲမေး ကျန်တဲ့တစ်ဘက်က ကျမ အကို 2ယောက်ပါတယ်🤨
ကျမကတော့ သမီးဆိုတော့ အမေ့ရဲ့ ရင်ဖွင့်စရာပေါ့
အမေက သူ ခံစားရတာတွေ သူ ဘာကြောင့် ယောက်ျားယူရတာတွေကို ကျမကို ပြောပြတယ် အမေ့ကို အရမ်းသနားတာဘဲ အမေ့ကို အပြစ်လဲမမြင်ပါဘူး
သူ့ဘဝ ကြမ်းတမ်းခဲ့ရတာကို လူတိုင်း ဒီလို ဆုံးဖြတ်မိမှာဘဲထင်တယ်
အမေ အချိန်တော်တော်ကြာ သူ့သားတွေ ဆိုးတဲ့ ဒါဏ် ရဲစခန်း တွေရောက် သူများကို လျော်ကြေးပေးရတဲ့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြုံခဲ့ရတာတောင် သူ့သားတွေဆိုးတာက သူ နောက်အိမ်ထောင်ပြုလို့ဆိုပြီး အမြဲတမ်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်😪
အခုတော့ အကိုတွေလဲ လိမ္မာသွားပြီ ကျမတို့လဲ ကြီးလာတော့ အမေ့ကို ချမ်းသာတဲ့ဘဝ မဟုတ်ပေမယ့် လိုလေသေးမရှိထားနိုင်လို့ အမေ စိတ်ချမ်းသာနေရပါပြီ
အမေပင်ပမ်းခဲ့ရတာတွေကို တွေးမိတိုင်း သနားလွန်းလို့ အခုချိန်မှာ ဘာကြောင့်မှ စိတ်မဆင်းရဲစေချင်သလို အမေ့အတွက်ဆို ဘာဘဲ ပေးဆပ်ရပါစေ ကျမကတော့ ပေးဆပ်မှာဘဲ
ညီအမတွေကို ပြောချင်တာက ကြုံလာတဲ့ လောကဓံကို ဖြေရှင်းတဲ့အခါ မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်တတ်ဘို့နဲ့
ရွေးချယ်တဲ့အခါ သားသား မီးမီးလေးတွေ နေရာကပါ စဉ်းစားပေးကြပါလို့
သတ္တိရှိရှိ ရဲရဲဝံ့ဝံ နဲ့ သားသမီးတွေ အတွက် လောကဓံကို ရင်ဆိုင် ကျော်ဖြတ်နေကြတဲ့ Single Momတိုင်းကို လေးစားပါတယ်
အားမငယ် စိတ်ဓာတ် မကျဘဲ အရာရာကို ရင်ဆိုင် ကျော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း ယနေ့ကျရောက်သော အမေများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်
မိန်းမသားတို့၏ Comment များ
A : မုဆိုးမ တခုလပ်ဆိုပီးယောက်ကျားတွေကအကဲစမ်းချင်တာကိုမိန်းမတွေကလဲ မိန်းမချင်းစာနာစိတ်မရှိပဲ သူတို့ယောက်ကျားကိုမြူဆွယ်တယ်ဆိုပီး အော်ဟစ်ဆဲဆို အမေကိုဆဲဆိုရုံတင်မကဘူး အရွယ်မရောက်သေးတဲ့သားသမီးကိုပါပုတ်ခတ်စော်ကားသေးတယ် တခါတလေ ဘဝကိုစိတ်ဓာတ်ကျမိတယ်
B : အမေကိုနားလည်မှု့ပေးတတ်တဲ့စိတ်လေးကိုချစ်တယ် ဒီလိုဘဝဆိုတာကိုယ်တိုင်ကျော်ဖြတ်ဖူးတဲ့မိန်းမတိုင်းနားလည်စာနာတတ်ကြတယ်မိန်းမချင်းမစာနာတတ်ကြတာလဲဒို့မိန်းမချင်ဘဲအိမ်ထောင်ဖက်မရှိတာနဲ့သူ့လင်ခိုးနိုးနိုးအထင်သေးကြတာလဲဒို့မိန်းမတွေဘဲ ဒါမို့တစ်ချို့မိခင်တွေကဒီလိုအခက်ခဲတွေကြောင့်နောက်အိမ်ထောင်ကိုပြုဖြစ်ကြတာ မမ လဲ(29)နှစ်မှာသားငယ်လေးမီးတွင်းသုံးရက်သားထဲကသူ့အဖေကအကြွေးတွေနဲ့ပြစ်ထားခဲ့တာခုဆိုသားငယ်လေစ(9)နှစ်ထဲရောက်နေပီငယ်ရွယ်ချိန်ကလေးသုံးယောက်အမေမို့ ရမလားလို့သွေးတိုးစမ်းတဲ့အောက်တန်းစားယောက်ျားတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရသလို ဒီမိန်းမ ကလေးတွေနဲ့ကြာရှည်မရပ်တည်နိုင်ပါဘူးငါ့ယောက်ျားများခိုးမလးလို့မိန်းမချင်းအထင်သေးတာလဲကြုံဖူးတယ် ဒါတွေကိုအံခဲဖြတ်ကျော်ရတာခက်ခဲပင်ပန်းပါတယ်ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ခုနောက်ပိုင်းကိုယ်အနေမှန်တော့ဘယ်သူမှမစရဲမပြောရဲပါဘူးအိမ်ထောင်ဖက်မရှိလို့ကလေးတစ်ဖက်နဲ့ရပ်တည်နေတဲ့မိခင်တိုင်းကအရာရာသူ့သာသမီးကသူ့အတွက်နံပါတ်တစ်ပါဘဲ သားသမီးဆိုတဲ့သံယောဇဉ်လေးကြောင့်ခက်ခဲတဲ့ကြားကသူတို့ဘဝကိုကျားကန်ပြီးရပ်တည်နေကြတာမို့ အထင်မကြီးရင်နေပါစေအထင်သေးမစော်ကားကြရင်ကိုကူညီရာရောက်ပါတယ်
C : သမီးမတွက်အမြဲဦးစာပေးတယ် စိတ်ဒဏ်ရာရမှာအကြောက်ဆုံးပဲ
D : လိမ်မာလိုက်တဲ့သမီးလေး
ဒီ Post လေးကတော့ တင်တင်ချင်းမှာပဲ မှတ်ချက် ၁၁ ခုရှိပြီး အဲ့ထဲကမှ အနည်းစုကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် . . .
မိန်းမသားတို့ရင်ဖွင့်ရာ Group ကို အဖွဲ့ဝင်လိုပါက Comment မှာ Group လို့ရေးခဲ့ပေးပါ
Categories General Knowledge, Tameelay Knowledge Tags 10 Post navigation
အမမြေားနမှေ့ာ အမရေေးတဲ့စာ (သမီးလေး လသားအရှယျက ရေးခဲ့တာပါ)
ရနေံခြောငျး အပူခြိနျကတော့ အဲဒါပဲ ကှနျကရဈလမျးကွီး ပူ ပှ တကျလာတယျ ၊ 45 ဒီဂရီ တဲ့ ၊